August 2014 | မိုးသကျဦးလှငျ
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရတဲ့..။ ရေးသူအများစုက မိမိတို့ ဘလော့ဂါဘဝ ဖြတ်သန်းပုံ အကြောင်းတွေ ရေးကြ၊ သားကြသည်.။ ငမိုးမှာတော့ ရေးချင်သားချင်သော်လည်း သွားကိုက်နေသည်.။ ဖြစ်ပုံက မြန်မာနိုင်ငံမှာကတည်းက သွားဆရာဝန်က အံဆုံးကန့်လန့် ဖြစ်၍ မပေါ့ရန် သေချာ မှာထားသည်.။ မော်စကိုတွင် နေလာသည်မှာလည်း သဘက်ခါဆိုလျှင် ၃ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါမှ ဒုက္ခမပေးဖူးသော သွားက ယခု အခါမှ ထ၍ ဒုက္ခပေးလေသည်..။
တကယ်တော့ ငမိုးရေးသော ဘလော့ဒေးသည် နှုတ်ဆက်သည့်စာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်..။ မကြာမီ ငမိုးလည်း မမြဲသော သင်္ခါရတရားနဲ့အတူ(တလွဲမတွေးပါနဲ့) နေရာမမြဲပဲ ပြည်တော်ပြန်ရတော့မည် မဟုတ်ပါလား..။ (မျက်ရည်မခိုင်သူများ ဆက်ဖတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိလျှင် ပဝါကြိုဆောင်ထားသင့်။) ငမိုးပြည်တော်ပြန် ပြီဆိုကြပါစို့..။ အကြီးကြီး ပြောရလျှင် နိုင်ငံခြား ဆိုတာကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည်ပေါ့..။ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား များထဲမှ အတိုင်းဆိုလျှင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ European suit ဆိုတာကြီးနဲ့ မျက်မှန်အနက်ကိုတပ် နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ပြီး လေဆိပ်ပေါက်ဝ တွင်လာရပ်သော မာစီဒီးစ် ကားပေါ်သို့ ပျော်ပျော်ကြီး လိုက်သွားပြီး ကုမ္ပဏီ ထောင်ရုံသာဖြစ်၏..။ သို့သော် ငမိုးတို့ကား ထိုသို့မဟုတ်..။ ကီလို ၃၀ ဝင်အောင် ထိုးသိပ်ထည့်လာသော ခရီးဆောင်အိတ် အကြီးကြီးနှင့် Hand carrier အိပ်ခပ်ကြီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ကဆွဲ၊ လက်ပ်တော့ထည့်သည့် လွယ်အိတ်က တစ်စောင်းလွယ်ထားသည်နှင့် လမ်းလျှောက်တိုင်း ဒူးကို လာလာတိုက်၊ ကင်မရာအိတ်ကလည်း ဘယ်ဖက်မှာ တွဲလိုတွဲလောင်းနှင့် အတော်ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း နိုင်သော ခရီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်..။ တစ်ခါ ဒီက ဆောင်းဝင်ခါစ မပူမအေး အနေတော်ကလေးနှင့် ပြန်သွားပြီး ရွှေတိဂုံမြေအရောင် တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးများရွှဲနေမည် ကိုလည်း ခံစားမိသေးသည်.။ တစ်ခါ ရှေ့မှ စီနီယာများ ပြောကြားချက်အရ
“မင်းတို့ကို တပ်က FAW ကားကြီးနဲ့ လာကြိုမှာ.. ငါတို့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ.. အေး ဘေးဘောင်တွေများ သံချေးတောင် တက်နေသေး”
“လေဆိပ်ထဲမယ် တန်းစီရဦးမှာ ငါ့ညီရ.. ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ ဟိုလူသည်လူက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်သွားသေး ”
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ငမိုးမကြာမီ မြန်မာပြည် ပြန်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်..။ ချူချာတို့ပြည်တွင် ၃ နှစ် တာကာလပတ်လုံး မြိန်ရာဟင်းကောင်း၊ ခင်ရာဆွေမျိုးလုပ်လာရင်း တကယ်ပင် အမျိုးအရင်းအချာတွေလို ရင်းနှီး မိသည့် သံယောဇဉ်များက အမြတ်ပင်..။ တစ်လ ၂ ခါလောက် သားတော်မောင်ကို Internet ကနေ လာကြည့်သည့် အမေတောင် ငမိုးပြလွန်းလို့ ဘလော့ဂါတွေကို သိနေပြီ..။
“ဟဲ.. အဲ့ဒါ ကန်ဒီခိုင်လား… ပိုချောလာတယ်နော်…” “ဟယ်… ငါ့ကို ဒေါ်ကျူတီချက်တဲ့ ဟင်းလေးတွေ ပြပါဦး ချက်ကြည့်ရအောင်” စသည်ဖြင့် တော်တော်များများကို နာမည်နှင့်လူ တွဲမိနေလေပြီ..။
ငမိုး ဘလော့ဂါဘဝကို စကတည်းက ဒီလူ၊ ဒီလူတွေဆိုတာ တကယ့် အမျိုးများဖြစ်သည်..။ အန်တီတင့်၊ အစ်မဂျက်၊ ချောကလတ်ကျူးပစ်လေး၊ အစ်မမဒမ်ကိုး၊ အစ်မကန်ဒီ၊ မိစံ၊ မပစ်၊ အစ်မမြတ်ကြည်၊ ကိုလွင်ပြင်၊ ဦးအိကု၊ ကိုရင်၊ မျှစ်၊ ဦးဟန်ကြည်၊ သူကြီးမင်း၊ ကိုမင်းဧရာ၊ မစနိုး၊ အစ်မသူသူ၊ လက်ဝဲ၊ မကွန်၊ အစ်မ မိုးငွေ့၊ ကိုအလင်းသစ်၊ ကိုမောင်တစ်လုံး၊ ကိုမောင်နှစ်လုံး၊ အစ်မ မိုးညချမ်း စသည်ဖြင့် ဒီလူတွေကပဲ ကိုယ့်ကို အားပေး နှစ်သိမ့်လာတာဖြစ်သည်၊ ဖေးမ ကူညီလာကြတာဖြစ်သည်..။
ကံဆိုးတာက ခေတ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်သည်..။ ငမိုးတို့က ဘလော့ခေတ်မှာ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် ဖြစ်ခဲ့ပြီလား ဆိုတာလည်းကောင်းကောင်း မတွေးတတ်.။ သေချာတာကတော့ လက်ဝဲရေးသည့် ပို့စ်ထဲကလို ဘလော့ဆိုတာ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းသည့် တောကြီးမျက်မည်းအရပ် ဖြစ်နေပြီလား ဟုပင်တွေးမိသည်။ အခြားသူကိုမေးစရာလို အဖြေကို ကိုယ်တိုင်သိပြီး ဖြစ်သည်…။ ပိုမို Response မြန်သော၊ Facebook ပေါ်မှာ Emotions အားသန်သော ငမိုးတို့ ပျော်မွေ့နေသည်မှာ ထူးဆန်းသော အရာမဟုတ်၊ တစ်ကြောင်းရေး၊ နှစ်ကြောင်း ရေး ဆိုသည့် “Status” ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်သော စာတိုများနှင့် ပျော်မွေ့နေသည်မှာလည်း ထူးဆန်းသောကိစ္စ မဟုတ်ပေ…။
နောက်ပိုင်းမှာ သူကြီးမင်းတို့၊ တီတင့်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ရေးဟယ်၊ ချွတ်ဟယ် လုပ်တော့မှ ဘလော့လေး လူပြန်စည်လာခြင်းဖြစ်သည်..။ ဒါတောင် ယခင်က Comments ၂၀၊ ၃၀ သမားက လေးငါးခြောက်ခုနှင့် တင်းတိမ် သွားကြရတာ များသည်.။ ယခင်က ၁၀၊ ၁၅ သမားများကတော့ ယခုအခါ နပ်မမှန်ချင်တော့..။ အရင် ရေးဖူးသော ကျုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း ဆိုသည့် ကဗျာလေး အတိုင်းမူ ကွန်မန့်ဟူသည် ဘလော့ဂါ အတွက် စာမူခ သာ ဖြစ်သည်..။ စာမူခ နည်းလာသောအခါ စာရေးရန် စိတ်မပါကြတော့..။
ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ အစ်မကန်ဒီ၊ သူကြီးမင်း၊ အစ်မ မိုးငွေ့၊ အန်တီတင့်တို့ကတော့ လေးစားစရာ ဖြစ်သည်..။ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပို့စ်တော့ ပုံမှန်တင်ကြသည်..။ လောကကြီးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ မိမိအလုပ်ကိုသာ အာရုံထားသူသည် အောင်မြင်သူ ဖြစ်သည်..။ ဘလော့လောကထဲမှာ ငမိုးတစ်ယောက် မအောင်မြင်သည်မှာ ထိုသို့အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်.။ သို့သော် အထက်ပါ အောင်မြင်သူများ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါလျက်နှင့် မိမိ ကျန်ခဲ့သည်ကို တွေးမိသောအခါ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ရတော့သည်..။
တကယ်တော့ မကြာခဏတွေးမိသည်မှာ ငမိုးအနေဖြင့် ဒီလူများကို သတိရနေမည် ဆိုတာသာ ဖြစ်သည်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သွေးကြောင်နေတာလားဟု မေးမိတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန် ကျိန်ဆဲမိသည်..။ မင်း စစ်သားမဟုတ်ဘူးလား ဆိုသည့်စကားက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးမိသည့် စကားဖြစ်လေသည်.။ အွန်လိုင်း မရှိတဲ့ အရပ်ရောက်သွားတော့ရော ဘာဖြစ်ပါသနည်း..။ တကယ်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါ..။ လက်ရှိ အသက် ၂၅ တွင် အသက် ၂၀ လောက်က Offline ဘဝနှင့် နေလာသည်မဟုတ်ပါလား..။ တရားသဘောအရ ကြည့်ရင် အားလုံးက ဧည့်သည်တွေချည်း ဖြစ်လေသည်..။ အားလုံးက သင်္ခါရတွေချည်းသာ ဖြစ်လေသည်.။ သို့ရာတွင် ပါရမီ မရင့်သော ငမိုးသည် ဘလော့ဂါဘဝဟူသော သင်္ခါရလေးကိုမူ နှောင်ဖွဲ့တွယ်တာမိနေလေသည်.။
ဤစာကိုရေးနေချိန်တွင် ငမိုးစိတ်၌ ဘာကိုပြောလိုသည် ထုတ်ပြော၍ မရ..။ သို့ရာတွင် ရင်အတွင်း၍ ပြောစရာ အပြည့်ရှိလေသည်..။ သို့သော် တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ ထွက်မလာ။ နောင်တစ်ချိန်တွင် ငမိုး အချိန်ရသည့်အခါတိုင်း အင်တာနက် လိုင်းမိသည့်အခါတိုင်း ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်သုံးစွဲခဲ့သော Blog Template လေးကို ပြန်ကြည့်မိပေမည်။ ယခင်က အမှတ်တရများစွာရှိသော ဘလော့ပို့စ်တို့ကို ပြန်ဖတ်မိချေမည်..။ ချစ်ဖို့ကောင်းစွသော အလေ့အထ ဖြစ်သည့် တဂ်ပို့စ်လေးများကို ပြန်ဖတ်ရင်း သက်ပြင်းချမိပေမည်.။ ငမိုး အိမ်ထောင်ရက်သား ကျသော အခါတွင်မူ ငမိုး၏ ချစ်စွာသော သားငယ်၊ သမီးငယ်တို့ကို “အဖေရုရှားမှာ ရှိတုန်းက ဘလော့တွေရေးခဲ့တယ်ကွ အဲဒီတုန်းက …” ဟု အစချီ၍ တစ်ချိန်က မိမိတို့အသံများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့သော ဘလော့ရွာကြီးအကြောင်း ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့်ဖြင့် စမြုံ့ပြန်မိပေမည်…။
တကယ်တော့ အားလုံးကို နှုတ်မဆက်ပဲ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်ထွက်သွားမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်.။ မိမိနှင့် ညီအစ်ကိုလိုနေသော ကိုအလင်းသစ်တို့ကတော့ သိကြမည်ဖြစ်သည်.။ ဘာပဲပြောပြော ယနေ့တီတင့် ကျေးဇူးဖြင့် ရေးဖြစ်သွားသော ဘလော့ပို့စ်သည် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်သော ပို့စ် ဖြစ်ချင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်..။ ဘဝ နှင့် ဆန္ဒ ထပ်တူမကျခြင်းကြောင့်ဘလော့ရွာမှ လက်ပြနှုတ်ဆက်သူနှင့် ဘလော့ရွာတွင်မိမိသဘောအတိုင်း ကျန်နေခွင့်ရှိသူ ကျန်ခဲ့သူနှင့် ချန်ခဲ့သူ မည်သူ ပိုလွမ်းသနည်းပြိုင်ကြစတမ်း ဆိုပါလျှင်….။
တော်လို့မဟုတ် ၊ ပျော်လို့မဟုတ်
တတ်လို့ မဟုတ် ၊ ငတ်လို့မဟုတ်.
အယ်ဒီတာမရှိ ၊ ကော်ပီကြမ်းမရှိ
လေထန်ကုန်းမရှိ ၊ စာမူခမရှိ
Comment ဆိုတာ စာမူခ..
မော်ဒယ် ဆိုတာ နတ္တိ..
အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံ ကုန်သွားလို့ဝမ်းမနည်းဘူး..
C Box က နှုတ်ဆက်စကားတွေနဲ့ ပြုံးပျော်လို့ရသေးတယ်..
ကျုပ်တို့ မှာ အသွေးအသားရှိတယ်
အနုပညာ ဆိုတာ ...
Posted by မိုးသက် at 6:53 AM 19 comments Read more
ကျွန်တော် ပရိုဖက်ရှင်နယ် စာရေးသူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သလား..??
ဒီမေးခွန်းဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် မကြာခဏ မေးမိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်.။ မေးမိတိုင်းလည်း အဖြေဟာ တစ်ခုပဲ ထွက်လာပါတယ်..။ ဟုတ်ကဲ့.. မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေပါ..။ ဘာဖြစ်လို့လဲ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော့်မှာ အလွန်အားနည်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်မူဟန်တစ်ခုပဲရှိပြီး ကျွန်တော် များများဖတ်လေ့ရှိတဲ့(သို့) လတ်တလော ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ စာရေးသူတွေရဲ့ အာဘော်တွေ၊ ရေးဟန်တွေက ရေးလက်စ စာထဲမှာ စိမ့်သွားတတ်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် PC မှာရေးခဲ့တဲ့ "ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှ ပြန်ပြောပြပါ့မည်" ဆိုတာ ဆရာမင်းလူရေးတဲ့ အသောပုံစံနဲ့ တူနေတယ်လို့ သူငယ်ချင်း တစ်ဦးက ပြောဖူးပါတယ်.။ ထို့အတူပဲ ဘလော့မှာရေးဖူးတဲ့ ဆောင်ပါးအချို့ "သဘောလောက်ပြောရရင်" "ပေါက်ကရဘလော့ဒေး" စတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်က အသော့ အထေ့နဲ့ ခပ်မြူးမြူးစာတွေ ရေးနေတာကိုတွေ့မှာပါ..။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်မူပိုင်ရေးဟန်က အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး..။ ကျွန်တော့်စာရေးတဲ့ပုံစံဟာ ရင်ဖွင့်တဲ့ ပုံစံ၊ ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံစံ၊ အဆွေးဇာတ်ပုံစံရေးတာမျိုးပါ..။ တကယ်တော့ ကိုယ်ပိုင်ရေးဟန်ဆိုတာလည်း ကိုယ်ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့/ အဖတ်များခဲ့တဲ့ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ အာဘော်တွေပေါင်းစပ် လာရာကနေ ထွက်လာတာပဲမဟုတ်လား..။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငမိုး ဆိုတဲ့ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် ထည့်ရေးတဲ့ပုံစံက ဆရာကြီး မောင်ထင်ရဲ့ ငဘကို အလွတ်နီးနီးရတဲ့ ငယ်ဘဝကတည်းက စိတ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ရေးဟန်က အလိုအလျောက် ပုံပေါ်နေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..။
ပထမဆုံး စာစရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိပြီး စရေးတဲ့ ဝတ္တုတိုကနေ စာမျက်နှာ ၃၀၀ ကျော်တဲ့ ဝတ္တုရှည်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပါတယ်...။ ကျွန်တော့်လက်က ဝတ္တုတိုရေးဖို့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့ မေးရရင် အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်က စာကိုရေးတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ စာကရေးတဲ့ ဝတ္တုနောက်ကို လိုက်ပါခံစားသူ ဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ..။ ဝတ္ထုထဲမှာ ချစ်ရေးဆိုတဲ့အခါ ရေးနေတဲ့ ကျွန်တော် ချွေးတွေပြန်ပြီး ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်နေတတ်တယ်.။ ဝတ္တုထဲမှာ ဒေါသထွက်စရာကြုံတဲ့အခါ ကျွန်တော် အပြင်မှာ အသက်ရှုတွေကြမ်းနေတတ်တယ်..။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝတ္တုတိုင်းကို ကြိုတင် Frame ချထားလေ့မရှိသလို၊ အကြမ်းလည်း ရေးလေ့မရှိပါဘူး..။ တစ်ခါတည်း လက်တန်းရေးပါတယ်.။ အဲ ရေးတဲ့အခါလည်း ငါ့ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လို သိမ်းမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ် ထားခြင်းမရှိပဲ.. ဇာတ်သိမ်းပိုင်းရေးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဇာတ်သိမ်းသွားတတ်တာမျိုးပေါ့..။ Psycho စစ်တဲ့ အရာရှိက ကျွန်တော့်ကို အပြင်စွဲများသူ လို့ မှတ်ချက်ပေးဖူးပါတယ်.။
နောက်ထပ် ကျွန်တော် ပရိုစာရေးသူတစ်ဦး ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းတစ်ချက်က ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ ဖိအားတစ်ခုကြောင့်စာရေးတတ်လေ့မရှိပါဘူး..။ ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှာ စာမူအပြီးရေးထားပေးပါ ဆိုတဲ့ ဖိအားတစ်ခုကြောင့် ညှစ်ထုတ်ရတဲ့ စာကို လန်ပြန်ထွက်ပြီး လူတိုင်းက သဘောကျလောက်အောင် ကျွန်တော်ပါရမီမပါခဲ့ပါဘူး..။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) စီစဉ်တဲ့ "စကားဝါပန်းတို့ရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာများ" စာအုပ်မှာ ကျွန်တော့်စာမူ တစ်ပုဒ်ပါပါတယ်..။ ခံစားချက်နဲ့ ဝေးတော့ ပရိသတ်မပြောနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မကြိုက်ခဲ့တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပေါ့.။ (ကိုကိုးအိမ်ကလည်း စာအုပ်ပို့ခိုင်းရင်သာ ဟိုရွှေ့သည်ရွှေ့လုပ်မယ် ..။ စာမူတောင်းတုန်းက နေ့ဂျီ၊ ညဂျီ နဲ့ပါ...။) ကျွန်တော် စာမရေးချင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဖိအားပေးပေး စာကောင်းကောင်းရေးလို့ မရနိုင်သလို၊ ကျွန်တော်စာရေးချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာလည်း မနက်ဖြန် စာမေးပွဲကြီးရှိတယ် ဆိုရင်တောင် စာအုပ်ပိတ်ပြီး ထရေးချင်ရေးတာမျိုးပါ..။
မင်းရေးတဲ့ စာတွေကို သိမ်းထား၊ ဥထားလေ လို့ တစ်ချို့က အကြံပေးပါတယ်..။ ဟင့်အင်း.. ကျွန်တော်က ကျွန်တော် စာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးရင် သိမ်းထားတာမျိုးလုံးဝ မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်ဟာ Blogger လေ..။ Online ကစခဲ့တဲ့ စာရေးသူလေ..။ Online က ပရိသတ်အတွက် ဦးစားပေးပါတယ်..။ ကျွန်တော် စာရေးပြီးတာနဲ့ စာလုံးပေါင်း၊ သတ်ပုံ၊ စာစီထားတာ ဘာညာ စစ်ပြီးတဲ့အခါ အွန်လိုင်းပေါ် တန်းတင်တာပါပဲ..။ ဒီစာလေးကတော့ ကောင်းလို့ ဘယ်အတွက်ချန်ထားလိုက်မယ်၊ ဥထားလိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ ကျွန်တော် ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် မေမြို့မိုး ဆိုတဲ့ ဘလော့လေးကနေ၊ နွေမိုး၊ မိုးသက်ဦးလွင် ဘလော့ ပြောင်းလဲပြီးတဲ့ အထိ၊ လက်တွဲခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ စီနီယာ ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ.။ ပရင့်ဖက်ကိုကျွန်တော် ကူးကောင်းကူးမိပါလိမ့်မယ်..။ ဒါပေမယ့် ပရိုမဆန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ပဲ အပျော်တမ်းစာရေးသူတစ်ဦးဘဝနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေဦးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မမေးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင်ဝန်ခံထားလိုက်ပါတယ်...။
Posted by မိုးသက် at 10:00 AM 1 comments Read more
Labels: ကျွန်တော့်အကြောင်း, ဆောင်းပါး
ငူငိုင်လေးတွဲ့၊ ခုံကို နှဲ့သည်
Home page ကိုဝင်၊ မဲမဲမြင်ရာ၊
"ဘယ်" ဟာ "ဘာ" ဟု၊ အာရုံပြုမိ
Home ပါ ပြန်ပိတ်...။
ငိုရီအခက်၊ ကိုယ့်ကိုယ် "နှက်" ၍
အခြေကို ပိတ်ကန်၊ ခြေသည်းလန်၏ ။
(စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရေးထားတာဗျာ..။ အသုံးအနှုန်းတွေ မဆီလျော်ရင် သည်းခံကြပါ. )
Posted by မိုးသက် at 7:02 AM0comments Read more
Posted by မိုးသက် at 12:34 PM0comments Read more